Guddiga doorashooyinka qaranka oo soo saaray go’aan ku saabsan doorashada - Awdinle Online
Guddiga doorashooyinka qaranka oo soo saaray go’aan ku saabsan doorashada
March 22, 2020 (Awdinle Online) –Qoraal ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxaa golaha shacabka ay kaga dalbadeen in ay dedejiyaan sharciyada laga doonayo iyo sidoo kale habraacyada, waxaana si gaara loo tilmamay golaha isku dhafka ah ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya
Ugu horeyn guddiga waxa uu sheegay in uu soo dhoweynayo sharciga doorashooyinga ee la meel mariyay islamarkaana uu madaxweynuhu saxiixay, waxaana arrinkaasi ay ku tilmaameen arrin taariikhi ah.
Sidoo kale guddiga ayaa golaha sharci dejinta ka dalbaday in ay dadejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo haatan horyaalla goalaha shacabka, si bey yiraahdeen ay xisbiyadu ugu gudbaan xibiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qeyb galaan doorashada 2020/2021.
Dhanka kaleGuddoomiyaha Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliima Ismaaciil Ibraahi (Xaliima Yareey) oo shir jaraa’id Warbaahinta u qabatay maanta ayaa waxa ay labada gole ee Baarlaaanka federalka Soomaaliya ka dalbatay in ay dadajiyaan meel marinta dib u eegista sharciga xisbiyada si ay ugu gudbaan xisbiyo sax ah oo ay kumeel gaarnimada uga soo gudbaan ugana qeyb galaan doorashada 2020-2021.
Xaliima yarey ayaa waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay in xisbiyada sida kumeel gaarka ah isku diiwaan galiyay ay soo buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay si ay ugu gudbaan xisbi rasmi ah.
Waxa ay ugu baaqday golaha isku dhafka ah ee u xilsaaran sugidda amniga doorashooyinka dalka in ay diyaariyaan qorshayaasha ay ku howlgalayaan ee sugidda amniga dorashooyinka.
Sidoo kale waxa ay shacabka Soomaaliyeed ka dalbatay in ay ka qayb qaataan xaqiijinta iyo hergalinta howlaha muhiika u ah doorashada la filaayo in dhawaan ay dalka ka dhacdo.
Halkaan hoose ka akhriso qoraalka kasoo baxay Guddiga Doorashooyinka
Previous articleDhageyso :-Dhaarinta Xildhibaanada konfur galbed Oo La Shaaciyay
Next articleItoobiya oo la wareegtay qalab Caafimaad oo loo qoondeeyay Wadama Afrika.